Ny hetsika rehetra azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fihetsika ao amin'ny iOS 7 | Vaovao IPhone
Ny hetsika rehetra azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fihetsika ao amin'ny iOS 7
Ao amin'ny iOS 7 dia afaka manao hetsika maro ianao amin'ny alàlan'ny fihetsika ary na dia tsy tsapantsika aza izany dia ampiasaintsika matetika ireo fihetsika ireo manatsara ny traikefa amin'ny fampiharana samihafa izay mandrafitra ny iOS. Ohatra, raha manetsika ny rantsan-tànantsika efatra isika dia hiseho ireo rindranasa izay mandeha (izany hoe ny multitask) na, raha toa ka manosika ny rantsan-tànana midina amin'ny Springboard isika dia manokatra Spotlight, ny fitaovana iOS mamela antsika hikaroka amin'ny alàlan'ny hafatra, rakitra ary rindranay.
Hanampy anao ity lahatsoratra ity fantaro ny hetsika tsirairay azontsika atao amin'ny fihetsika ataontsika amin'ny alàlan'ny iOS 7. Te hahafantatra azy ireo ve ianao?
Fihetsika iOS 7 rehetra
Ao amin'ny mailaka: Ny mailaka IOS 7 (tera-tany) dia manana fihetsika maromaro azontsika ampiasaina isan'andro:
-Raha te-hahita amin'ny fomba tsotra ny mailaka ananantsika ao anaty boaty mailaka isika dia tsy maintsy mamindra ny rantsan-tananantsika avy amin'ny sisiny havia mankany ankavanan'ny iPad mba hisehoana ho azy ny lisitra misy ireo mailaka. Mba hampanjavona azy dia tsy maintsy ataontsika ny fizotran-javatra.
-Mba hamafa mailaka dia tsy maintsy soloantsika ny rantsan-tananantsika amin'ny mailaka miankavanana sy miankavia, ary hanana bokotra mena isika: «Archive».
-Rehefa tonga ny mailaka iray ary te hamaly azy izahay dia afaka manao ilay fihetsika teo aloha ary tsy manindry ny "Archive" dia afaka manindry ny "Bebe" ary hiseho ny hetsika maromaro izay azontsika atao amin'ny alàlan'ny fikitihana azy ireo .
Ivotoerana fanaraha-maso: Ny famindrana ny rantsan-tanantsika avy eo amin'ny farany ambany amin'ny iPad dia hataontsika mivelatra ilay Center Control vaovao. Amin'ity fitaovana vaovao ity dia azontsika atao ny mifehy ny fiasa fototra an'ny Fikirakira Terminal nefa tsy miditra ao.
Spotlight: Ao amin'ny iOS 7, niova ny fitaovana hikarohana rakitra ao amin'ny iDevice. Tsy miseho intsony ity ho pejy iray intsony ao amin'ny Springboard fa tsy maintsy manao fihetsika isika mba hampisehoana ity fitaovana ity: esory ny rantsan-tananantsika amin'ny faritra rehetra amin'ny Springboard hidina ary haseho ny saha izay hidirantsika izay tiantsika hatao karoka
Safari: Ao amin'ny Safari dia manana fihetsika vitsivitsy azonay ampiasaina tsy misy olana izahay
-Raha te hiverina any amin'ny pejy teo aloha isika nefa tsy mila manindry ny zana-tsipìka eo an-tampon'ny fampiharana, afindra ny rantsan-tànanao amin'ny ilany havia amin'ny efijery mankany ankavanana
-Mifanohitra amin'izany no izy, raha te hiditra amin'ilay pejy notsidihina izahay avy eo, afindrao fotsiny ny rantsan-tanananao avy eo ankavanana miankavia.
-Etsy ankilany, afaka manidy takelaka misokatra isika amin'ny alàlan'ny famindrana ny rantsantananantsika (ao amin'ny fizarana Tabs) miankavia na miankavanana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny kiheba tiantsika hikatona.
Multitask: Ao amin'ny iOS 6, multitasking dia tao anaty bara iray nipoitra teo ambanin'ny efijery, eo ambanin'ny dock.
-In iOS 7 dia amin'ny toerana hafa tanteraka izy ary hanokatra azy dia mila manetsika rantsana efatra miakatra amin'ny fampiharana rehetra isika.
-Raha te-hanidy fampiharana misokatra isika dia tsindrio fotsiny dia aforeto ambony ny rantsan-tanantsika.
Notification Center: Ny foiben'ny fampandrenesana dia ny toerana ao amin'ny iOS izay ananantsika ny fampahatsiahivana rehetra, ny fanendrena amin'ny alimanaka ary ny fampandrenesana ireo fampiharana napetraka ary ireto no fihetsika azonay ampiasaina:
-Mba hanokafana azy dia tsy maintsy esorintsika tsotra izao ny rantsan-tananantsika avy eo an-tampon'ny efijery (izay tonga ny fotoana).
-Mba hifindra eo anelanelan'ny takelaka samihafa (anio, ...) azontsika atao ny manetsika ny rantsantanana miankavia na miankavanana.
Efijery hidin-trano: Raha te hamaha ny iPad dia mila manetsika ny rantsan-tànantsika avy miankavia sy miankavanana fotsiny isika (ary apetraho ny teny miafina na PIN raha ananantsika izany).
Ireto ny sasany amin'ireo fihetsika nasehon'ny iOS 7 na dia azonay antoka fa diso ny sasany, mampiasa iray izay tsy eto amin'ity lisitra ity ve ianao?
Fanazavana fanampiny - Ahoana ny fomba hidirana haingana amin'ny manager multitasking
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » Ny hetsika rehetra azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fihetsika ao amin'ny iOS 7
Fredy AG dia hoy izy:
Misaotra an'ireo toro-hevitra ireo, taloha be aho nanontany tena hoe ahoana ny fomba hampiasana multitasking nefa tsy mampiasa ny bokotra 😛
Valiny tamin'i Fredy AG
Angel Gonzalez dia hoy izy:
Fantatrao fa mila soloinao fotsiny ny rantsan-tananao efatra na aiza na aiza ao amin'ny iOS.
Mamaly an'i Ángel González
Dakota Avaratra dia hoy izy:
Azonao atao ve ny manazava mazava kokoa ny fomba fanidiana kiheba amin'ny Safari? Tsy afaka mamerina ny hetsika aho. Misaotra mialoha. Lahatsoratra tena tsara
Mamaly an'i Dakotadelnorte
Ity fihetsika hanakatonana kiheba ity dia natokana ho an'ireo mpampiasa iPhone, raha manana iPad ianao dia mila tsindrio fotsiny ny lakroa (x) izay mifanila amin'ny takelaka tsirairay ...
Raha manana iPhone ianao dia tsy maintsy miditra amin'ireo takelaka ary manao izay voalaza ao amin'ilay lahatsoratra.
Izay fanontaniana rehetra, apetraho hatrany 🙂
Hevitra iray hafa momba ny fomba anantenan'ny sasany ny iPhone 6
Ny votoatin'ny rafitra fiasan'ny iOS dia entina amin'ny Nokia N900